Kitiho, adaptatera hampiasa fehy hafa amin'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Ny Apple Watch dia hanana rafitra ampifamadiho ny fehy haingana sy mora. Tsindrio fotsiny ny bokotra kely izay tafiditra ao ambadiky ny famantaranandro mba hamotsorana ny fehin-tànana ary solafaka mba hanesorana azy.
Apple dia hanolotra fehezam-boninkazo marobe ho an'ny tsirairay hampahafantatra manokana ny famantaranandro araka izay tadiaviny, saingy azo antoka fa ho fitaovana miaraka amin'ny vidiny lafo izy ireo noho ny fananana izany mekanika natao manokana ho an'ny Apple Watch. Soa ihany, tsikelikely mifandimby toa Kitiho mba hahafahanay mampiasa karazana tadiny hafa.
Ny tsindrio dia tsy inona fa adaptatera izay ampidirina ao anaty lavaka mifanandrify amin'ny Apple Watch ary misy pin ho ampiasaina amin'ny misy azy Tady 24 mm Malalaka.
Amin'izao fotoana izao, ny sary mivezivezy avy amin'ny Click dia tsy misy afa-tsy prototypa novolavolaina tamin'ny fampiasana mpanonta 3D. Mba hahatonga ity fitaovana ity ho zava-misy, ny mpamolavola azy hitodika any Kickstarter izy ireo ao anatin'ny roa herinandro hanangonana ny vola ilaina hivarotana ny kinova farany an'ny vokatra.
Ny mbola tsy fantatra dia ny hahitana ny jiro ve ny Click. Tsy ny adaptatera voalohany ho an'ny Apple Watch no tonga ao Kickstarter ary tsy maintsy hamarana aloha ny fampielezan-kevitra noho ny tsindry avy amin'i Apple.
Raha mikasa ny hividy ny Apple Watch amin'ny volana aprilyAzo antoka fa hiafara amin'ny fividianana zavatra mitovy amin'ny atolotry ny Click antsika ianao, satria na ho ela na ho haingana dia hiseho ireo adaptatera ahafahantsika mampiasa fehikibo bebe kokoa noho ireo atolotry ny orinasa paoma.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Tsindrio, adaptatera ahafahanao mampiasa tadiny hafa amin'ny Apple Watch